အိမ်လုပ် buttercream နှင်းခဲကိုမည်သို့သိုလှောင်ရမည်နည်း
Casseroles သည်အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးအလွယ်တကူအရသာရှိသောအစားအစာဖြစ်သည်။ bean casserole မှသည်ချိုသောအာလူး casserole အထိဤအချို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဤနှေးကွေးနေသောချက်ပြုတ်သူနှင့် Crockpot ချက်ပြုတ်နည်းများသည်မီးဖိုရှေ့တွင်မရပ်ဘဲအရသာရှိသောအိမ်တွင်းအစားအစာများနှင့်နှစ်သိမ့်သောအစားအစာများကိုဖန်တီးရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
Закуска & သရေစာ
လူအစုအဝေးအတွက်လွယ်ကူသော appetizers ၏အကောင်းဆုံးစာရင်း! ငါတို့အကြိုက်ဆုံးရေခဲမုန့်များမှအရသာရှိသော bruschetta အထိရှာပါ။ ဤလက်ချောင်းများသည်နောက်ဆုံးပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးသောပွဲဖြစ်သည်။ လွယ်ကူသောအအေးစာမှသည်ညစာစားပွဲမတိုင်မီ (သို့) နောက်ဆုံးမိနစ်ညစာစားပွဲမတိုင်မှီပေါ့ပါးသည့်အစာစားချိန်အထိသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးထားပါသည်။
ဆုရှင်ဆုရှင်ကြက်သားညစာ! ဤရွေ့ကားအံ့သြဖွယ်ကြက်သားချက်ပြုတ်နည်းများလျင်မြန်စွာသင်၏အသစ်သောအကြိုက်ဆုံးအချို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ... ငါသူတို့သတ္တုတွင်းနေသိ!
ဟင်းချို & Stews
ဒိန်ခဲ Instant Pot Mac မှဒိန်ခဲမှ Corned Beef Hash အထိ Cream Cheese Brownies သည်ရာပေါင်းများစွာသောအမျိုးအစားများကိုချက်ပြုတ်နည်းများဖြင့်ရှာဖွေသည်။ သင်၏လာမည့်စုရုံးမှုနှင့်မိသားစုညစာတို့ကိုမြည်းစမ်းကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ထားသည့်အဆင့်များ၌တိုပြီးကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းများဖြင့်ထမင်းပါ။
ဤပြီးပြည့်စုံသောအဖျော်ယမကာချက်ပြုတ်နည်းများသည်အအေးမှသည်အထိ၊ အချိုရည်၊ အရက်သေစာနှင့်အရက်မဟုတ်သောအဖျော်ယမကာများအထိအမျိုးမျိုးရှိပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။
မြေသားအမဲသားချက်ပြုတ်နည်းများသည်မြန်ဆန်။ အရသာရှိလှသည်။ ဒီစုဆောင်းမှုထဲမှာ, အလွန်ကြီးစွာသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေအပြင်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုအေးခဲနှင့်အညိုရောင်မြေအမဲသား!
ဤနေ့လည်စာချက်ပြုတ်နည်းများသည်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သောရှေ့ဆက်နေ့လည်စာများ၊ ပူပြင်းသည့်နေ့လည်စာများ၊ နေ့လည်စာဟင်းချိုများ၊ သုပ်များနှင့်အခြားအရာအားလုံးမှအရာအားလုံးပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏နေ့လည်စာအချိန်သည်အလွန်ကောင်းသည်။
မြေသားအမဲသားချက်ပြုတ်နည်းများမှသည်အမဲသားနှင့်အမဲသားစွပ်ပြုတ်အထိပင်လျှင်ဤလွယ်ကူသောအမဲသားချက်ပြုတ်နည်းများသည်သင့်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အဓိကဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Meatless Main Dishes သည်တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်မည်သည့်နေ့ရက်တွင်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မိသားစုတစ်ခုလုံးပျော်မွေ့မည့်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအရသာရှိသောအစားအစာအတွက်ပရိုတိန်းများနှင့်ပြည့်နေသည်။